रोनाल्डो : ४ वर्षअघि बेखुसी, अहिले छोड्नै नसक्ने
जेठ १३ – स्टार स्ट्राइकर क्रिष्टियानो रोनाल्डोले रियल मड्रिड छोडेर अरु क्लब नजाने बताएका छन् । रोनाल्डोले आउँदो हप्ता रियल मड्रिडसँग नयाँ सम्झौता गर्ने स्पेनिस सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पोर्चुगलका रोनाल्डोले गएको फेब्रुअरीदेखि क्लबसँग आफ्नो सम्झौता...
आँपको उत्पादनमा झण्डै ७० प्रतिशतले कमी
सप्तरी, १३ जेष्ठ । सप्तरीमा यस वर्ष आँपको उत्पादनमा झण्डै ७० प्रतिशतले कमी आएको जिल्ला कृषि कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । आँपको उत्पादनमा एक दशक यता नै यस वर्ष आँपको उत्पादनमा सबैभन्दा बढी कमी आएको हो । सप्तरी जिल्लामा कूल ५ हजार ४ सय ५० हेक्टर जग्गामा करिब दश...
यातायात व्यवसायीहरुद्वारा चक्काजाम
काठमाडौं, १२ जेठ । ट्राफिक प्रहरीले वृद्धि गरेको जरिवाना फिर्ताको माग गर्दै शुक्रबारदेखि यातायात व्यवसायीहरुले चक्काजाम गर्ने भएका छन् । बिहीबार बिहान पाँच बजेदेखि बेलुका पाँच बजेसम्म भाडाका सवारी साधन नचल्ने बताईएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय...
कतै जाँदै हुनुहुन्छ ? भाडाका सवारी साधन चलेका छैनन्
१३ जेठ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायात बन्द नगर्न चेतावनी जारी गरेपनि यातायात मजदुर व्यवसायीले चक्काजामको कार्यक्रम अायोजना गरेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले वृद्धि गरेको जरिवाना फिर्ता गर्न माग गर्दै बिहीबारका लागि चक्काजाम घोषणा गरेका हुन्...
माउरिन्हो, ग्वार्डिओला, कोन्टे र क्लोपः को सफल होला ?
१२ जेठ, काठमाडौं । जोजे माउरिन्होले म्यानचेष्टर युनाइटेडको प्रशिक्षक नियुक्त भएपछि आगामी सिजन प्रिमियर लिग सुपरस्टार म्यानेजरहरुको घर हुनेछ । युनाइटेडसँगै चेल्सी, म्यानचेष्टर सिटीमा अर्को सिजन नयाँ म्यानेजरहरु हुनेछन् । मोउरिन्हो औपचारिक नियुक्तिको...
डलरमाथि प्रियंकाको हट फोटोसुट
बलिउड नायिका प्रियंका चोपडा यतिबेला हलिउड यात्रमा दौडिरहेकी छिन् । हलिउड यात्रामा रहेकी प्रियंकालाई मिडियाले पनि उच्च स्थान दिएका छन् । हालै मात्र नायिका चोपडाले ‘कप्लेक्स’ नामक म्यागेजिनका लागि फोटोसुट गराएकी छिन् । उनले ट्विटरमा यो फोटो शेयर गर्दै...
७० रुपैयाँ दिएर सात बर्षीया बालिका बलात्कृत, अभियुक्त पक्राउ
रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा एक सात बर्षीया वालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले ५४ वर्षीय कपिलदेव साहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । घरमा अभिभावक नभएको मौका छोप्दै बलात्कार गरेको भन्दै ईलाका प्रहरी कार्यालय...